Keio University - Higher Education Abroad na Japan
tọrọ ntọala : 1858
Echefukwala discuss Keio University
Keio dị na Tokyo na Kanagawa, otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa isi mepere emepe. Bi na Tokyo bụ a ohere na-enweta Japan site isi obodo ya na ya ọtụtụ iche ihu: pụrụ iche omenala, eke mara mma, na futuristic technology. Na ihe nile nke oge a n'ọnyà na conveniences nke a oge a na obodo, Tokyo e ndondo họọrọ ụwa kasị mma obodo ibi, na bụkwa onye nke ya kasị dịrị nchebe na ọcha. Tokyo bụkwa a adaba ọnụ ụzọ ámá niile nke Japan na ndi fọduru nke Asia.
-Abịa Keio na-amalite gị onwe gị na njem site na obi nke obodo, na iche nlegharị anya na ụda nke Keio si ọmụmụ ha na a gbasaa eme.
Ebe i bi dị nnọọ ka mkpa dị ebe ị na-amụ. Keio-enye ụmụ akwụkwọ mfe, mma ndu gburugburu na-agba ume na mmekọrịta ma kwe ka nzuzo, otú i nwere ike ịnụ ụtọ mkpakọrịta ndị ọgbọ gị ma na-enwe ụfọdụ ohere na-amụ ihe na-esote udomo oro. Na ihe nile na ọtụtụ ala-akwụ ụgwọ karịa tụnyere mahadum n'ebe ndị ọzọ na Japan na ná mba ọzọ. International ụmụ akwụkwọ ndị rurula a dum usu-scholarships, na Office of Mmụta Ọrụ dị aka ụmụ akwụkwọ na mbipụta ha pụrụ iche ihu ha kwa ụbọchị ndụ.
Na mpụga nke ụlọ klas (na gị dorm ụlọ), a ojuju campus ndụ na-echere. E nwere ihe karịrị 450 klọb na ọha mmadụ na-agba ọsọ n'afọ ofufo site ụmụ akwụkwọ nile àgwà nke egwuregwu na ọdịmma. Ịga otu n'ime ndị na-ewu ewu Sporting ihe na-etinye on site Keio University Athletic Association, nke ugbu a nwere 40 ukara klọb na ìgwè. Echefula isonyere otu n'ime Keio si nwa akwụkwọ na-agba ọsọ campus ememme, nke bụ isi Isi nke agụmakwụkwọ na ẹkenịmde kwa afọ na onye ọ bụla nke Keio si campuses dị ka ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu na-amụrụ ihe n'ebe ọ bụla Japan.
Anyị bi ugbu a n'oge oké mgbanwe. Mgbanwe ndị a dị ka okpomọkụ n'ụwa, merela agadi bi, esiwanye ike zuru ụwa ọnụ ahịa mpi, na ihe na-amụbawanye amụbawanye cyber ohere na-fundamentally na-enwogha dum Ọdịdị nke ahụ mmadụ na anyị na-ebi. Na ndị dị otú ahụ a oge nke oké mgbanwe, ọ na-aghọ ihe na ọzọ ike ka anyị na-atụle ihe na-edozi nsogbu ka ma ọ bụrụ na ha bụ nanị extensions nke gara aga.
Ihe dị mkpa ebe a bụ ikike ịghọta a ọnọdụ ọhụrụ na ihe kwesịrị ekwesị dabere na nghọta a. Ndị ọzọ okwu ike na-echere onwe gi echiche ga-ukwuu ina. Enyere, ikike nke iche echiche maka onwe gị bụ usoro nke a mara otu ihe iseokwu, -akọwa na nke, verifying nkọwa iji chọpụta ma ọ ga-egbochi, na ọ bụrụ na nkowa n'ezie jide, etinye ya n'ime ihe na-etolite ngwọta. Nke a bụ ụkpụrụ nke mmụta-nke a mara ihe unsolved nsogbu, arụ a amụma na ezi uche na-akọwa nsogbu, na-anwale amụma ebe dị iche iche na nkà mmụta sayensị ụzọ iru ná mkpebi.
N'ihi ya, ikike nke iche echiche maka onwe gị bụ, n'ezie, enwetara site mmụta, na nke a bụ ya mere anyị nchoputa Yukichi Fukuzawa, bụ ndị na-biri na a oge nke isi mgbanwe site na feudal Edo ka oge a Meiji oge, mesiri mkpa nke mmụta. N'oge oké mgbanwe, -eduzi aga n'ihu, -eduga nnyocha na-aghọ esiwanye mkpa. Ọmụmaatụ, anyị kwesịrị ịchụso ma na-omimi na interdisciplinary nnyocha nke pụrụ idozi nsogbu ndị dị ka okpomọkụ n'ụwa na onu ogugu ịka nká, nke na-eyi egwu na nkwado nke anyị na otu, na ihe nnyocha nke puru iluputa ọhụrụ uru ime ka anyị na otu bara ọgaranya karị n'agbanyeghị di ọku zuru ụwa ọnụ ahịa iwu na-mmụba nke cyber ohere.
Iji kwalite ndị a na ụdị nnyocha, Keio University na-eme mgbalị nile iji nye a mma gburugburu ebe obibi nke anyị na-arụsi ọrụ ngalaba òtù na ụmụ akwụkwọ, onye na-raara onwe ha research na eke na sayensị, -elekọta mmadụ na sayensị, na Humanities, na-enwe ike n'ụzọ zuru ezu na-aghọta ha ikike. Anyị nchoputa Yukichi Fukuzawa guzosie ike Keio University na-eme ka mmadụ site mmụta na a oge nke oké mgbanwe, na anyị na-achọ ịghọta ya tọọ ntọala ụkpụrụ na dịkọrọ ndụ n'ụwa site na eme na mmadụ ndị pụrụ iche echiche nke onwe ha ma nweta ọhụrụ amamihe maka abamuru nke ọha mmadụ.
Ukpep School of Science and Technology
Keio University e guzobere 1858 as a School of Western studies located in one of the mansion houses in Tsukiji by the founder Fukuzawa Yukichi. Its root is considered as the Han school for Kokugaku studies named Shinshu Kan established in 1796. Keio changed its name as “Keio Gijuku” na 1868, which came from the era name “Keio” na “Gijuku” as the translation of Public school. It moved to the current location in 1871, established the Medical school in 1873, and the official university department with Economics, Law and Literacy study in 1890.
Ị chọrọ discuss Keio University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Keio University ukara Facebook